Top Siyaabaha kaabta Your iPhone Ka hor inta jailbreak macruufka 7
> Resource > iPhone > Top Siyaabaha kaabta aad iPhone Ka hor inta jailbreak macruufka 7
Waxa ay ahayd dhowr bilood in dadka isticmaala Apple filan u JAILBREAK ka untethered ee macruufka 7. Ugu dambayntiina, waxa ay halkan - Qiyaanada 7. kooxda Qiyaanada ayaa sii daayay jaijlbeak ka untethered ee macruufka 7. Waxaa u shaqeeya wax iPhone, iPod taabto, iPad socda ee macruufka 7 iyo ka dib. Oo waxaa kaliya ayay qaadataa in user a 5 daqiiqo xabsi jebin qalab Apple ah. Waxaad kartaa download Qiyaanada 7 iyo raac tutorial video ee sida xabsi jabinin iPhone .
Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aadan xabsiga ku jebin macruufka aad 7 qalab, waa in aad u gurmad sida waxa kooxda Qiyaanada ayaa sheegay in "Fadlan gurmad ah qalab aad ka hor intaadan dalban JAILBREAK ah. Mana aha wax halkaas oo uu noqon doono wax dhibaato ah, laakiin aan awoodno 't wax dammaanad qaad. " Backing qalabka macruufka 7 waa quruxsan fudud, sababta halis xogta aad. Hoos waxaa ku qoran siyaabaha ugu sareysa si ay gurmad qalab Apple hor JAILBREAK.
# 1. Xogta iPhone kaabta la iCould hor JAILBREAK 7 macruufka
# xogta iPhone 2. kaabta la Lugood hor JAILBREAK ee macruufka 7
# 3. kaabta faylasha warbaahinta iPhone (music, video, sawiro) ka hor macruufka 7 JAILBREAK
Fiiro gaar ah: jidadkiisa oo dhammu kor ku xusan jirta waxaa loogu talagalay iPhone, iPad, iPod iyo hadduu taabto socda ee macruufka 7 iyo ka dib. Halkan waxaan iPhone qaado sida tusaale in ay kuu sheegaan sida loo sameeyo.
# 1. Xogta iPhone kaabta la iCloud hor JAILBREAK ee macruufka 7
iCloud waxay noqon kartaa mid ka mid ah habka ugu fiican ee aad gurmad iPhone haddii aadan rabin in aad isticmaasho cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone laakiin Wi-Fi. Si gurmad xogta aad iPhone on iCloud hor JAILBREAK ee macruufka 7, waa inaad raacdid talaabooyinkan hoos ku qoran:
Connect aad iPhone la ah Wi-Fi, Settings gujinaya> iCloud. Raadi Kaydinta ah & kaabta hoose oo guji.
Sahlo iCloud fursad u kaabta. Kadib Tallaabada 1aad, aad "si aad u computer Your iPhone gurmad mar dambe si toos ah marka aad u hagaagsan oo Lugood" ka arki kartaa farriin. Guji "OK" iyo tirtiri kaabta ku Haddaba ON.
Taasi waa! Ka dib markii ay taageero aad iPhone, waxaad dareemi doontaa lacag la'aan ah xabsiga u burburin. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo, aad u soo celin kartaa iPhone la gurmad iCloud ee aad dhigtay.
# 2. xogta iPhone kaabta la Lugood hor JAILBREAK ee macruufka 7
Lugood waa default iyo qalab fiican ee iPhone. Ka sokow u isticmaalaya sida qalab kala iibsiga ah, iyo sidoo kale waxa aad isticmaali karto si aad gurmad iPhone. Oo qaadataa waqti yar in ay gurmad aad iPhone la Lugood hor xabsi jebinta ee macruufka 7.
Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. Iyo in la hubiyo in aad iPhone u muuqataa in Lugood.
Guji View> Show galeeysid. Markaas tahay in aad awoodid in aad aragto iPhone waxaa soo bandhigay hoos AALADAHA dhinaca bidix ee Window Lugood ah.
Riix tab Kooban oo ku saabsan suuqa kala muhiimsan ee Lugood. Markaas tahay ahayd inaad aragto iPhone ee aasaasiga ah info. Guji "Ccomputer Tani" (gurmad ah oo ka buuxa aad iPhone lagu kaydin doono computer tan) iyo "Back Up Hadda".
Tani waa sida aad u gurmad aad iPhone on your computer ka hor inta aadan u fuliyaan JAILBREAK ee aad iPhone. Waxaan aaminsan yahay in sida tani waa sahlan, ka dib oo dhan, oo aad ku xidhi doonaa adiga iPhone iyo xabsi jebisay wax on your computer sameeyo.
Lugood iyo iCloud Labada saamaxaaya in ay gurmad xogta iPhone aasaasiga ah, sida goobaha, waraaqaha derbiga, xiriirada, xisaab Calendar, files ee ku giringiriya Camera, barnaamijyadooda, iwm Sida Lugood Store iibsaday alaabta, waxaad iyaga redownload karo. Si kastaba ha ahaatee, songs dooxay ka CD-yada, videos soo bixi internetka, iyo sawiro synced ka your computer si toos ah tirtirayaa. Haddii aad rabto in gurmad kuwaas oo dhan files warbaahinta on iPhone ka hor JAILBREAK ah, hoos ku qoran akhri.
Tan iyo Apple ayaa la siiyaa qalab inay wax ka iPhone u hesho in ay Lugood ama computer ah, waxaa loo baahan yahay qalab halkan dhinac saddexaad ah. Waxaan si adag ugu talinaynaa TunesGo Wondershare . Waxaa kuu saamaxayaa inaad nuqul ka music oo dhan ka iPhone si toos ah aad Lugood Library la click hal. Oo waa inay awoodaan inay u dhoofiyaan songs soo xulay, videos, sawiro Lugood U, Podcasts, buugaag, iwm ka iPhone si aad u computer. Maxay u fiican, ka dib markii JAILBREAK ee macruufka 7, waxaad isticmaali kartaa aalad si aad nuqul ka songs, videos, sawiro ka your computer si toos ah aad iPhone aan syncing itune.
Download TunesGo Wondershare for Windows ama Wondershare TunesGo Mac version in ay leeyihiin isku day!
Burcad TunesGo on your computer. Connect aad iPhone la your computer.
Laga soo bilaabo Panel Controal ee Music, Movies, Photos, Playlists, iwm, waxaad tahay inay awoodaan inay u dhoofiyaan wax file xushay ka iPhone in Lugood Library ama computer. The "Smart dhoofinta in Lugood" masaf doonaa heeso ka jiraan on Lugood aad, u gudbiyaan oo kaliya, kuwaas oo aad u baahan yahay si aad Lugood Library. Nuqul No ahbaa doonaa.